कसरी छान्ने अनुहार सुहाउँदो सनग्लास ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कसरी छान्ने अनुहार सुहाउँदो सनग्लास ?
गर्मी सीजन शुरू भएको छ । यो सिजनमा हावाहुरी चल्ने भएकाले धुलोबाट बच्न हामीले सनग्लासको प्रयोग गर्छौं । तपाईले प्रयोग गर्ने सनग्लासले आँखालाई धुलोबाट बचाउनुका साथै तपाईको लुक्स स्टाइलिस बनाउँछ । तपाईलाई सुहाउने सनग्लास किन्न यी कुरा जानी राख्नुहोस् ।
–आँखाको सुरक्षाका लागि यूवी किरण प्रोटेक्सन भएको सनग्लासको किन्नु उचित हुन्छ । त्यसैले, बजारमा पाइने सनग्लासमा ९९ प्रतिशत यूवी किरण प्रोटेक्सन भएको खरिद गर्नुहोस्, जसले घामको विकिरणबाट तपाईको आँखालाई सुरक्षाका साथै तपाईलाई स्टाइलिस बनाउँछ ।
–तपाईले किन्ने सनग्लासको आकार तपाईको मुहार सुहाउँदो हुनुपर्छ । कुनै पनि सनग्लास छनौट गर्दा तपाईको आँखाको सानो साइज र ओभर साइज हुनु हुँदैन । यदि सनग्लासको साइज मिलेन भने तपाईको आँखामा असर पुर्याउन सक्छ । सनग्लासको आकार तपाईको आँखाको साईजसँग मिल्ने हुनुपर्छ । यसले तपाईलाई परफेक्ट स्टाइलिस लुक्स दिन्छ ।
–सनग्लास किन्दा रङमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तपाईले ड्राईभिङ गर्ने समयमा लगाउने चस्मा अरु समयमा लगाउन उपर्युक्त नहुन सक्छ । यसैगरी सिजनअनुसार चस्माको रङले पनि प्रभाव पर्दछ । जस्तै रातो र खैरौ रङको चस्मा चिसो मौसममा राम्रो हुन्छ । यसैगरी वर्षातको सिजनमा सुन्तला रंगको चस्मा राम्रो हुन्छ । गर्मी मौसममा कालो रङको चस्मा राम्रो मानिन्छ ।
अनुहारको आकारअनुसार सन्ग्लासको फ्रेम छनौट
आफ्नो अनुहारको आकारअनुसार सनग्लासको फ्रेम छनौट गर्न सक्नु भएन भने तपाईको पैसा नोक्सान हुनुका साथै तपाईको लुक्स पनि राम्रो देखिदैन ।
आफ्नो लुक्सलाई राम्रो बनाउन सनग्लासको फ्रेम यसरी छनौट गर्नुहोस्ः
गोलाकार वा गोलो अनुहार– गोलो अनुुहार साधारण आकार हो । यदि तपाईको अनुहार गोलाकार छ भने स्क्वायर वा चौडा फ्रेमको सनग्लास छनौट गर्नुहोस् । यो फ्रेमको सनग्लासमा तपाईको लुक्स राम्रो देखिन्छ । तपाईले ओभरसाइज चस्मा पनि लगाउन सक्नु हुन्छ ।
चौडा अनुहार– तपाईको अनुहार यदि चौडा छ भने सनग्लासको फ्रेम गोलाकार छनौट गर्नुहोस् । यसले तपाईको लुक्सलाई राम्रो देखाउँछ ।
अण्डाकार अनुहार– अण्डाकार अनुहार राम्रो आकारको अनुहार मानिन्छ । तपाईको अनुहार पनि अण्डाकार छ भने तपाईले सनग्लासको कुनैपनि फ्रेम छनौट गर्न सक्नु हुन्छ ।
मुटु आकार अनुहार – तपाईको अनुहारको आकार मुटु आकारको छ भने तपाईले मिडियम साइजको सनग्लासको फ्रेम छनौट गर्नुहोस् । यसले तपाइर्को लुक्सलाई राम्रो देखाउँछ ।
त्रिकोणाकार अनुहार– तपाईको अनुहारको आकार त्रिकोणाकार छ भने सनग्लास छनौट गर्दा ठूलो साइजको फ्रेमको छनौट गर्नुहोस् । तपाईको अनुहारमा ओभर साइजको सनग्लासको फ्रेम एकदमै राम्रो देखिनेछ ।